No sign of radicalisation in Rohingya, says Bangladesh Foreign Secretary – CRM
Posted on October 7, 2017 April 9, 2019 Author swelsone	Comment(0)
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်သေအထောက်အထား အခိုင်အမာရှိရင် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူသွားမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုစွမ်းက ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်ပြေးသွားတဲ့ မွတ်ဆလင်အမျိုးသမီးတွေအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့အပေါ် မြန်မာသံအမတ်က ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုစွမ်းက “လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေကို မြန်မာအစိုးရက ခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မြန်မာအစိုးရက အလေးထား ပြောပြီးသားပါ။ သက်သေအထောက်အထား အခိုင်အမာရှိရင် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကို တရားဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူသွားမှာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပဋိပက္ခတွင်း လိင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ပါရာမီလာပတ်တန်ကတော့ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်ကနေ […]
The former commander of UN peacekeeping forces in Rwanda says the “will to intervene” on the Rohingya crisis is missing. By Dominic Waghorn, Diplomatic Editor – Exclusive A world authority on genocide has told Sky News what is happening to Myanmar’s Rohingya Muslims is undoubtedly genocide and the international community must intervene to prevent it. […]